အ၀ှာမပါလို့………. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အ၀ှာမပါလို့……….
Posted by khinmintatthu on Aug 11, 2010 in Aha! Jokes, Satire |3comments
ဦးသိန်းဆု။ ။ ရွှေပွဲလာ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ၀ိုင်းတော်သားတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးရအုံးမယ်။ ဟောဒီက ဆိုင်းဆရာကြီး စိန်မြသောင်း…
ဆိုင်းဆရာ။ ။ တစ်ချက်နှစ်ချက် လက်စွမ်းပြလိုက်သည်.. (ပလို့ဂျိ.. ပလို့ဂျိ…)။
ပရိတ်သတ်။ ။ ရယ်သံများ…
ဦးသိန်းဆု။ ။ ဟော ဟိုက နှဲဆရာ ကိုငွေကိုင်…
ဦးသိန်းဆု။ ။ ထပ်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးရ အုံးမယ်… ဟောဒီက မောင်းဆရာ ကိုတုတ်ကြီး…
ဦးသိန်းဆု။ ။ မောင်ဆရာကြီးက အရင်က နှယ်နှယ်ရရ မဟုတ်ပေဘူးဗျ… အရင်တုံးက အစိုးရရုံးက ငွေကိုင် စာရေးကြီး… သူက မျက်မှန် ချွတ်ထားရင် သိပ်မမြင်ရဘူး။ အဲဒီတုံးက တရက်မှာ ဗိုက်ကြီးသည်တစ်ဦး သူအလုပ်စားပွဲနား မတ်တပ်ရပ်နေတာ မီးခံသေတ္တာနဲ့ မှားဖွင့်မိလို့ အလုပ်ပြုတ်လာပြီး ကျုပ်တို့အဖွဲထဲ မောင်းလာတီးနေရတာ…
ဦးသိန်းဆု။ ။ ဟော ဟိုက ပတ်မကြီး ဆရာ ကိုမြသိန်း… သူကတော့ အရင်က အင်ဂျင်နီယာပေါ့။ ယန္တရားစက်ကြီးတွေ ကိုင်ရတာ။ တစ်ခေါက်က ဘေးနားချထားတဲ့ ထညက်ရည်ပုံးကြီးကို အင်ဂျင်ဝိုင်နဲ့ မှားထည့်မိလို့… အလုပ်ပြုတ်လာပြီး ကျုပ်တို့ အဖွဲ့ထဲမှာ ပတ်မကြီးလာတီးနေရတာဗျို့.. .
ဦးသိန်းဆု။ ။ စာရွက်ကလေးကိုင်ပြီး … “အလှူ့ဒကာကြီး ဦး… က မင်းသမီး အတွက် ဆုတော်ငွေ ငါးထောင်တဲ့… ကျွန်တော်တို့ သုံးဦးအတွက် ဆုတော်ငွေ နှစ်ထောင်ကျပ်စီ ချီးမြှင့်ပါတယ်… “… အလှူ့ ဒကာကြီး ဦး… နဲ့ အလှူ့အမကြီး ဒေါ်… တို့ ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး စီးပွားဥစ္စာများတိုးတက်ပါစေကြော င်း ဟောဒီ အငြိမ့်စင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ ဆုတောင်း ပထ္ထနာပြု လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား….
ဦးပေါစံ။ ။ နေအုံး… ကိုသိန်းဆု… ဆုတော်ငွေဘယ်လောက်ချသလဲ ပြန်ပြော စမ်းပါအုံး…
ဦးသိန်းဆု။ ။ မင်းသမီးကို ငါးထောင်… ကျုပ်တို့ကို နှစ်ထောင်စီ…
ဦးပေါစံ။ ။ ပရိတ်သတ်ကို ကြည့်၍… ကိုင်း… မင်းသမီးကျတော့ ငါးထောင်တဲ့ဗျ…. ကျုပ်တို့ လူရွှင်တော်တွေကျတော့ နှစ်ထောင်စီတဲ့… ကျုပ်တို့က အ၀ှာမပါလို့ နေမှာ ဗျ…နှော့်..
ဦးသိန်းဆု။ ။ ဘာမပါတာလဲဗျ.. ခင်ဗျားဥစ္စာကလည်း…
ဦးပေါစံ။ ။ အ၀ှာမပါလို့ နေမှာပါဆို…
ဦးသိန်းဆု။ ။ ဘာလဲဗျ… ရှင်းစမ်းပါအုံး…
ဦးပေါစံ။ ။ ရယ်ကျဲကျဲဖြင့်…. အော်.. အနုပညာ ဗီဇ ကို ပြောတာပါဗျာ…
ပရိတ်သတ်။ ။ ရယ်သံများ….
ha ha …လူရွှင်တော်တွေသိဖို့ကောင်းတယ်လေ ။
ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် ဦးပေါစံမျက်နှာနဲ့လေသံကို မြင်ယောင်ကြားမိတယ်။